အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Dec 6, 2011
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, December 06, 2011 Tuesday, December 06, 2011 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
“အနူး. အိမ်ပြန်ချင်တယ်.. ဒီမှာ မနေချင်ဘူး။ ပြန်ရအောင်… ကျွန်တော် ကျောင်းမတက်ရတာလည်း ကြာပြီ။ စာမေးပွဲလည်း ဖြေရဦးမှာ။ ကျောင်းမတက်ရင် စာမေးပွဲ မဖြေရဘဲ နေတော့မယ်”
ကလေးအငယ်ကောင်ကို ပွေ့ကာ နို့တိုက်နေသည့် မထုဘူမှာ မသိသားဆိုးဝါးစွာဖြင့် ဘေးနားကနေ တစ်တွတ်တွတ်နှင့် ဂျီတိုက်နေသည့် သားအကြီးကောင် ဂမ်ရှောင်ကို စိတ်မရှည်စွာ မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး ကြည့်နေမိရင်း သူ့ခေါင်းကို လက်သီးဖြင့်ထုတော့မည်ဟန်ပြင်လိုက်ပြီးမှ သတိဝင်လာကာ လက်ကို ပြန်ရုတ်လိုက်ရသည်။ “အင်းလေ ကလေးက ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ.. သူဖြစ်ချင်တာသာ သိသည်ဘဲလေ” ဟု ပြန်တွေးမိသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ “နောက်တော့ ပြန်ရမှာပေါ့. အခုတော့ ဘယ်လိုပြန်လို့ ဖြစ်မှာလဲ။ အနူးတို့ ရွာတွေဘက်မှာ စစ်ဖြစ်နေတယ်လေ။ ပြန်သွားရင် အနူးတို့ ဒုက္ခရောက် ကုန်မှာပေါ့၊” ဟုသာ ဂမ်ရှောင်ကို ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“အဲဒီ စစ်ကလည်း ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေကြတာလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းလည်း မတက်ရတော့ဘူး၊ ဒီမှာနေရတာ အရမ်းချမ်းတယ်.. အိမ်ဘဲပြန်ချင်တယ်။ အဝါး( အဖေ) ကလည်း ခုထိ ပြန်မလာသေးဘူး” ဟု ရေရွတ်နေရင်းက သူ့သူငယ်ချင်းများ ဆော့ကစားနေသော နေရာကို ထထွက်သွားတော့သည်။
ဂမ်ရှောင်နှင့် ကလေးများ ဆော့ကစားနေကြသည်ကို ငေးကြည့်ရင်း မထုဘူတစ်ယောက် ဝမ်းနည်းနေမိသည်။ လူပေါင်း ၅၀၀ခန့် ခိုလှုံနေထိုင်နေရသော ဒီနေရာကို ရောက်နေသည်မှာ တစ်လခန့် ရှိနေပြီ။ မထုဘူတို့ သားအမိနှင့်အတူ ရွာကိုစွန့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးလာသူများမှာ မထုဘူတို့ တစ်ရွာလုံးသာမက ထိုအနီးနားရှိ အခြားသော ရွာက လူတွေပါ ဒီနေရာလေးကို ရောက်လာကြသောအခါ သူမတို့ ခိုလှုံနေရသော ဂိုဒေါင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ နောက်ထပ် လူအတွက် နေရာပင် မရှိတော့အောင် ပြည့်ကြပ် ညှပ်လို့ နေလေတော့သည်။ သူမတို့ဒီနေရာရောက်အောင် ရွာထဲမှ မိသားစုများ အားလုံး အထုပ်အပိုးများ ကိုယ်စီလွယ်ပိုးကာ ၂ရက်တိတိ လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရသည်။ မြစ်ကြီးနားတွင် အမျိုးများရှိသော်လည်း သွားဖို့ရန် လမ်းခရီး ဝေးကွာလွန်းသည့် အပြင် လမ်းတစ်လျောက် စစ်ပွဲများဖြစ်နေသည့်အတွက် နယ်စပ်ဖက်သို့သာ တောလမ်း အသွယ်သွယ် ရှောင်ကာ ကွင်းကာဖြင့် ရောက်လာကြရသည်။
ဆန်မှအစ အိမ်တွင်ရှိသည့် စားသောက်စရာ အချို့နှင့် ၊ အဝတ်အထည်၊ စောင်အိပ်ရာခင်း စသည်တို့ကို ကလေးများပင် မကျန်နိုင်သလောက် သယ်ပိုး ယူဆောင်လာကြသော်လည်း ရက်ကြာလာသည့်အခါ စားစရာဆန်မှာ လျော့နည်းလာကာ မရှိသလောက် ဖြစ်လာသည်။ အဆိုးဆုံးမှာ အိပ်ရာခင်း၊ စောင် စသည်တို့မှာ ထူထူထဲထဲ သယ်မလာနိုင်သည့်အတွက် ဒီဇင်ဘာလ၏ ဆောင်းရာသီကို အံတုဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ ဂိုဒေါင်တွင်းရှိ ကွန်ကရိခင်းထားသော ကြမ်းပြင်သည် အိပ်ရာခင်း ပါးပါးလေးသာ ခင်းထားနိုင်သောကြောင့် ညအချိန်တွင် ကျောပြင်တစ်လျှောက် ရေခဲတမျှ အေးခဲနေစေတော့သည်။
ပါလာသည့် စောင်ပါးကလေးနှစ်ထည်မှာ ဘယ်လိုမှ အချမ်းမပြေနိုင်သော်လည်း ကလေးတွေကို ဦးစားပေးကာ ခြုံစေရသည်။ ဂိုဒေါင် အမိုးပေါ်တွင် ဖောက်ဖောက် မြည်အောင် ကျဆင်းနေသော ဒီဇင်ဘာည၏ နှင်းတို့ကလည်း စစ်ကြောင့် ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်လာရသူ များကို အညှာ အတာမဲ့စွာ နှိပ်စက်နေလေသည်။ ထိုအချိန်များတွင် အေးလွန်း၍ အိပ်မရသော လူကြီးတစ်ချို့ အပြင်တွင် မီးပုံကြီးဖိုကာ ငုတ်တုတ် ထိုင်နေကြရသောကြောင့် မထုဘူပါ မီးပုံဘေး သွားသွားထိုင်နေရသည်မှာ အမြဲလိုလိုပင်။ တဖြေးဖြေး ပိုပိုချမ်းလာသော တောင်ပေါ်ဒေသ၏ ဒီဇင်ဘာဆောင်းကို အံတုဖို့ရာက စောင်များများ မပါလာသော သူများအတွက် အခက်တွေ့ရတော့သည်။ မီးပုံဘေးတွင် ထိုင်သာ နေနေရသော်လည်း အဆက်မပြတ် ကျဆင်းလာသော နှင်းများကြောင့် ခေါင်းပေါ်တွင် ရွှဲရွှဲစိုနေလေတော့သည်သာ။
စစ်ပွဲ သတင်းများကြောင့် ရွာကလေးဆီမှာ အလျင်စလို ထွက်ပြေးလာရသည့်အခါ အခြား အရေးကြီးသော ဆန်နှင့် ရိက္ခာများ ဦးစားပေး သယ်လာရသဖြင့် စောင်များများနှင့် အဝတ်အထည်များများ သယ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် နိုင်သလောက်သာ နောက်လွယ်( ပလိုင်းများ) ဖြင့် သယ်ယူလာကြရသည်။ ကလေးများပင် အထုပ်အပိုးနှင့် တစ်နိုင်သယ်ကာ ၂ရက်ခရီးကို လမ်းလျှောက်ရင်း စစ်မြေပြင်ဖြစ်လာမည့် လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ရှိနေသော ရွာများမှ ထွက်ပြေးလာခဲ့ရသည်။ တစ်လနီးပါးကြာလာတော့ ခိုလှုံနေသည့် ဂိုဒေါင်ကြီးနှင့် ၈မိုင်ခန့် ဝေးသော ရွာကလေးဆီ လိုအပ်တာ လေးတွေကို သွားသွား ဝယ်ရသည်မှာလည်း ပါလာသည့် ငွေစအနည်းငယ်လေးမှာ ကုန်သလောက်ရှိလေပြီ။ ဂိုဒေါင်တွင် နေရာ မရှိတော့သည့်အတွက် တောင်စောင်းတစ်လျှောက် တဲထိုးကာ နေကြရသူများလည်း ရှိသေးသည်။ ထိုအထဲတွင် မထုဘူ ညီမတို့ မိသားစုလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ဒီကာလအတွင်းမှာ မထုဘူအတွက် စိတ်မကောင်းအဖြစ်ရဆုံးမှာ ဂမ်ရှောင်လေး ကျောင်းမတက်ရတော့ တာဘဲ ဖြစ်သည်။ သူမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ယခု နေထိုင်သည့် ရွာတစ်ဝိုက်သည်လည်း စစ် မကြာခန ဖြစ်တတ်သည့် နယ်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန် ခက်ခဲခဲ့သည့် အတွက် ထိုအချိန်တုန်းက ရွာတွင် ကျောင်းပင်မရှိခဲ့ပါ။ သည့်အတွက် မထုဘူမှာ ယခုအရွယ်သာ ရောက်သည် စာတစ်လုံးမှ မဖတ်တတ်ခဲ့ပါသည်။ တောင်ယာလုပ်၊ ဝက်မွေး၊ တောတောင်ထဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာ ဘဝဖြင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်။ မြစ်ကြီးနားတွင် ရှိနေသော မထုဘူတို့ အမျိုးတစ်ချို့မှာ ပညာတတ် သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မြစ်ကြီးနားမြို့ကို အလည်သွားသည့် အခါတိုင်း မြို့ ပေါ် မှာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် နေနေရသော ပညာတတ်သည့် သူ့အမျိုးများကို အားကျမိ သည်။ မြစ်ကြီးနား ကို ပြောင်းလာဖို့ အမျိုးများက အကြံပေးကြသော်လည်း တစ်သက်လုံး တောရွာ ကလေးတွင် ကြီးပြင်းလာသော သူမအနေဖြင့် မြို့ပေါ်မှာ မလုပ်ကိုင် မစားတတ် ဖြစ် မည်ကို ကြောက်ရွံ့ မိသဖြင့် မပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါ။
မထုဘူ၏ မျှော်လင့်ချက်မှာ ဂမ်ရှောင်ဖြစ်သည်။ သားကို ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်သည်။ သူမ ငယ်ငယ်က မသင်ခဲ့ရသော ပညာများကို သင်စေချင်သည်။ သားများကို ပညာတတ်ပြီး မြို့ပေါ်မှာ နေထိုင် အခြေချစေချင်မိသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဂမ်ရှောင် ဒီနှစ် ၄တန်းအောင်ပြီးလျှင် မြစ်ကြီးနားရှိ အဒေါ် တစ်ယောက် အိမ်တွင် ပို့ထားပြီး ကျောင်းကို တက်စေဖို့ ရည်မှန်းထားမိသည်။ ဂမ်ရှောင်လေး မှာလည်း ကျောင်းတက်ရသည်ကို အလွန်ပျော်သည့်ကလေးဖြစ်သည်။ အခြားကလေးငယ်များလို မိဘက တောင်ယာသွား၊ စိုက်ခင်းသွားသည်ကို လိုက်ချင်သည့် ကလေးမျိုး မဟုတ်၊ ချောင်းရေထဲမှာ ဖားရှာ၊ ငါးရှာ ပျော်သည်မျိုး မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသွားဖို့ကိုသာ အင်မတန် စိတ်ပြင်းပြသူ ဖြစ် သည်။ ကျောင်းက သင်ပေးလိုက်သည့် စာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား သင်ယူတတ်သဖြင့် ဂမ်ရှောင်လေးမှာ တစ်နေ့တော့ ဘွဲ့ရ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဖို့ မထုဘူအတွက် အကြီးမားဆုံး မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်နေတော့သည်။
သို့သော် ယခုဖြစ်နေသော စစ်ပွဲများကြောင့် ဂမ်ရှောင်တို့ ကျောင်းမတက်ရသည်မှာ တစ်လကျော်လာပြီ။ ဘယ်ချိန်ပြီးဆုံးမည် မသိသော စစ်ပွဲသတင်းကို စောင့်မျှော်နေရသည်မှာလည်း မောလှပြီဖြစ်သည်။ ရွာမှ ဆရာမများသည်ပင်လျှင် အစောကတည်းက မြို့ပေါ်သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ စစ်ဖြစ်ချိန် ရှည်ကြာပြီး ကျောင်း မတက်လိုက်ရလျှင် စာမေးပွဲလည်း ဖြေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည့်အတွက် ဂမ်ရှောင်နှင့်အတူ အခြားသော ကျောင်းသားအရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် မထုဘူ ရင်လေးမိသည်။ သူမ ငယ်စဉ်တုန်းကလို ပညာမသင်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်မျိုးကို ခုခေတ် ကလေးငယ်တွေ မကြုံတွေ့စေချင်ပါ။ စစ်ပွဲများ မရှိသည်မှာ နှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါး ရှိလာပြီးကာမှ အခုတစ်ဖန် မထုဘူတို့ ငယ်တုန်းကလို စစ်ပွဲများ ပြန်ဖြစ်လာသည့်အတွက် ပြေးရ လွှားရ ဘဝကို စိတ်ဆင်းရဲမိရပါသည်။ အထူးသဖြင့်တော့ အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးငယ်များအတွက် ပို၍ စိတ်ပူပန်မိပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သုံးရက်ကပင် မထုဘူ ယောင်္ကျား ကိုဘရန်အောင်နှင့်အတူ အခြားသော ရွာသား ၅ယောက်ခန့်က ရွာဘက်က အခြေအနေကို သွားကြည့်မည်ဟု ဆိုကာ ထွက်သွားကြသည်မှာ ခုထိ ပြန်မရောက်ကြသေးပါ။ အခြေအနေ ကောင်းပြီဆိုလျှင်တော့ ရွာပြန်ကြမည်ဖြစ်ပြီး မကောင်းသေးပါက ရွာထဲသို့ ဝင်လို့ရလျှင် အိမ်တွင် ကျန်ရှိနေသော ရိက္ခာများကို ရသလောက် သယ်ယူ လာကြမည်ဟု ပြောသွားကြသည်။ မထုဘူ အနေနှင့်မူ အိမ်ပြန်ရဖို့ကို မျှော်လင့်မိပါသည်။ ထိုအခါတွင်တော့ ဂမ်ရှောင်နှင့်အတူ အခြားသော ကလေးငယ်များလည်း ကျောင်း ပြန်တက်နိုင် မည်၊ ပြီးတော့လည်း အစားဆင်းရဲ အနေဆင်းရဲလှသော ဒီနေရာကနေ ထွက်ခွာပြီး မိမိ အိမ်မှာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် အိပ်စက် နားခိုနိုင်မည်။ ရွာက အိမ်ကလေးတွင် ကောက်ရိုးလေးခင်းပြီး အိပ်ရသည်မှာ ကောင်းလှသည် မထင်ခဲ့သော်လည်း ခုချိန်မှာ ထိုကောက်ရိုးခင်း အိပ်ရာလေးကိုပင် တမ်းတမိတော့သည်။
အတွေးနယ်ထဲမှာ လွှင့်ပါနေသော မထုဘူမှာ ထမင်းချက်ရန် သတိရလိုက်ပြီး အိတ်ထဲမှ ဆန်အနည်းငယ်ကို အိုးထဲထည့်လိုက်ကာ ရေထည့်ဖို့ ပြန်သောအခါ ဝါးကျည်တောက် ထဲတွင် ရေ မရှိတော့ သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရေပုံးမရှိ၍ အနီးနား တောအုပ်ထဲမှာ ဝါးပင်ကို ခုတ်ယူကာ ရေဘူးအဖြစ် သုံးနေရလေသည်။ ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ လူ၅၀၀ ကျော်မှာ မိမိသက်ဆိုင်ရာ မိသားစု အလိုက် ထမင်းဟင်းများကို ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အနီးဆုံးရွာမှာလည်း ၈မိုင်ခန့်ဝေးပြီး ထိုရွာကလေးမှာ အိမ်ခြေ အနည်းငယ်သာ ရှိသောကြောင့် မထုဘူတို့ လူအုပ်ကြီးကို မကူညီနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော် အချို့ ရွာသူရွာသားများကတော့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကူညီကြသော်လည်း ဒီလောက်များလှသည့် လူအုပ်ကြီးအတွက်တော့ ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက်သလိုသာ ဖြစ်တော့သည်။
ပြီးတော့လည်း သူမတို့ နေထိုင်ရာ ဂိုဒေါင်နှင့် ရေရှိရာ တွင်းကလေးမှာ အတော်ကိုလှမ်းသည်။ သို့သော် မတတ်နိုင်။ ထမင်းချက်ဖို့ ရေသွားခပ်ရမည်ဖြစ်၍ ဝါးကျည်တောက်လေးကို ကောက်ကိုင်လိုက်စဉ်မှာ သားအငယ်လေးက သိပ်ထားရာမှ အော်လေတော့သည်။ သို့နှင့် ဝါးကျည်တောက်ကို ပြန်ချကာ ကလေးကို ချော့ရပြန်သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ဆော့နေသော ဂမ်ရှောင်လေးကို လှမ်းအော်ကာ ရေခပ်ဖို့ ပြောလိုက်ရတော့သည်။ ဝါးကျည်တောက်လေးကို ယူကာရေခပ်ရန် ထွက်သွားသော ဂမ်ရှောင် နောက်ကျောကို ကြည့်ကာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပြန်သည်။ သို့သော် ကြာကြာ စဉ်းစားမနေအားပါ။ ဂိုဒေါင် ပတ်ဝန်းကျင်အနီးက ဝါးအခြောက် အခြမ်းလေးများရှာကာ ဂိုဒေါင်က စွန့်ပစ်ထားသည့် အုတ်ခဲကျိုးကိုစုပြီး သုံးပွင့်ဆိုင် ဖိုခနောက် လုပ်ထားသည့် မီးဖိုတွင် ထမင်းချက်ရန် မီးမွှေးလေတော့သည်။
အိုးမည်းမည်းတွင် ထည့်ထားသော ဆန်ကို ရေများများနှင့် ဆေးနိုင်မည်မဟုတ်။ ရေခပ်ရတာ ဝေးလှသဖြင့် ဆန်ထဲ ရေထည့်ကာ ထမင်းချက်လိုက်ရုံသာ လုပ်နေကြရသည်။ အနည်းငယ်ရှိနေသော ငရုပ်သီးကို ဆားဖြင့် ထောင်းထားလိုက်သည်။ အခြားဟင်းလည်း ချက်စရာမရှိပါ။ ငရုပ်သီးထောင်းဖြင့် ထမင်းစားနေရသည်မှာ ဘယ်နှစ်နှပ်ရှိပြီဟုပင် မရေတွက်နိုင်တော့ပါ။ ရောက်ခါစကတော့ ပါလာသည့်ရိက္ခာများကို မိသားစုအချင်းချင်း ဝေမျှ စားသောက်ကြသော်လည်း ပါလာသည့် စားသောက်စရာများ ကုန်လေသည့်အခါ ရှိသည့် ငွေကလေးနှင့် ရွာကလေးသို့ သွားရောက် ဝယ်ယူကြသည်။ ယခုအခါတွင်လည်း မည်သူ့ထံမှ ငွေစများ မရှိတော့ပါ။ ကုန်သလောက်ရှိလေပြီ။ အနီးနားရွာမှ လာရောက် လှူဒါန်းသည့် စားဖွယ်များကိုသာ မှီခိုနေရသော်လည်း မထုဘူတို့နေရာသည် အလွန်ခေါင်ဖျားလှသော နယ်စပ် တစ်နေရာတွင် ရှိလေသည့်အတွက် အလှူရှင်များလည်း အလွန်ရှားပါးလှသည်။ အနီးအနား တောတောင်များထဲမှ ပိန်းရွက်၊ မုန်ညှင်း စသည်တို့ကို ရှာဖွေ စားသောက်ရတော့သည်။ ငရုပ်သီးအခြောက်မှာ ခပ်များများ သယ်ယူလာ၍ ကျန်နေသေးသဖြင့် အခြားအသီးအရွက် မရှိသည့်ခါ ငရုပ်သီးထောင်းကိုသာ အားပြုစားရတော့သည်။
အသားငါးဆိုသည်မှာ ဘယ်ဆီနေသည်ပင် မသိတော့ပါ။ အနီးနားတစ်ဝိုက်တွင် မြစ်ချောင်း ဟူ၍လည်း မရှိသောကြောင့် ဖားရှာ ငါးရှာလည်း ရှိမရနိုင်သလို တောကောင်ပစ်ဖို့လည်း လက်နက်ကိရိယာ မရှိကြပါ။ အစားအသောက် ကောင်းကောင်းမစားရသဖြင့် နို့ထွက်နည်းလာသောကြောင့် မထုဘူ၏ နို့စို့အရွယ် ကလေးလေးမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိန်လှီလာခဲ့သည်။ သို့သော် သူမ ကလေးတင်မှ မဟုတ်ပါ။ စခန်းရှိကလေးငယ်များမှာ ထိုနည်းနှင်နှင်သာ ရှိလေသည်။ အားလုံး၏ ရင်ထဲတွင် စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံးပြီးဆုံး၍ နေရပ်သို့ ပြန်နိုင်ခွင့်ရဖို့ကို မျှော်လင့်ဆုတောင်းမိကြပါသည်။ ပညာမတတ်သော မထုဘူမှာ စစ်ပွဲတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကို မသိသော်လည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက စစ်၏ အနိဌာရုံများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူပီပီ စစ်ပွဲများကို မုန်းတီးလှသည်။ တောင်ယာလုပ်၊ အခင်းစိုက်ဖြင့် ကြီးပြင်းလာရသော်လည်း သူမတို့ ဒေသက ကလေးငယ်များကို သူမကဲ့သို့ စာမတတ် ပေမတတ် မဖြစ်စေချင်ပါ။ အများနည်းတူ ပညာတတ်အဖြစ် ကြီးပြင်းစေချင်ပါသည်။
ရေခပ်ရာမှ ပြန်ရောက်လာသော ဂမ်ရှောင်သည် ရေထည့်လာသည့် ဝါးကျည်တောက်ကို မထုဘူ ဘေးတွင်ချကာ သူငယ်တန်းတုန်းက သူသင်ခဲ့ရသည့် “ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည် ဖူးတံဝင့်လို့ချီ” ကဗျာလေးကို အော်ဆိုကာ သူ့သူငယ်ချင်းများရှိရာသို့ ထွက်ခွာသွားလေသည်။ အပြစ်မဲ့ ကလေးငယ်များကတော့ ဂိုဒေါင်ရှေ့ ကွင်းပြင်တွင် ထင်းများစုဆောင်း နေရာရွေ့သူရွေ့၊ ကစားသူ ကစားဖြင့် ဘာမှမသိဘဲ ရောက်သည့်နေရာတွင် ကလေးပီပီ ပျော်ရွှင်နေကြသော်လည်း စာသင်ခန်းကို သတိရနေမည်မှာ ဘယ်သူကမှ မငြင်းနိုင်ကြသည့် အမှန်တရားသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ လူကြီးများ ကတော့ အေးစက်နေသော ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်နှင့် မြေကြီးပေါ်တွင် အိပ်စက်နေရပြီး အစားအသောက် ဆင်းရဲသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဘဝမှ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ရော ကလေးများကိုပါ လွတ်ကင်းလိုလှပါပြီ။
အဖိုးအဖွားများ ပြောလေ့ရှိသည်ကို မထုဘူကြားဖူးသည်မှာ ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်သည့်အခါ ခတ်လမ်းကြောင်းတွင်ရှိသည့် မြေဇာမြက်ပင်တို့မှာ ညက်ညက်ကြေသွားတတ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း စစ်ပွဲဟူသည့် ကျွဲနှစ်ကောင် ခတ်သည့်ကြားတွင် မထုဘူ၏ သားသမီးအပါအဝင် ကလေးငယ် လေးများမှာ မြေစာမြက်ပင်များပမာ အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲ၊ ဟိုပြေး ဒီလွှားဖြင့် နေရာမရ ဒုက္ခ ရောက်ကြရလေပြီ။ စာသင်ခန်းများနဲ့လည်း ဝေးခဲ့ရပြီ။ ထို့ကြောင့်လည်း မြေစာမြက်များ ပိုမို များပြားလာခြင်း မရှိအောင် စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံး ပြီးဆုံးပါစေဟူ၍သာ အားလုံး၏ ရင်ထဲမှာ နာကျင်စွာနှင့် ဆုတောင်းနေမိ ပါတော့သည်။
မိမိရဲ့သားသမီး မောင်ညီမတွေ စာသင်နေကြချိန်မှာ ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း စာသင်ခန်းနဲ့ဝေးကွာပြီး အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲနဲ့ မြေစာမြက် ကလေးတွေပမာ ရှိနေကြရရှာတဲ့ ဒီကလေးတွေဟာ သင်ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ မောင်နှမတွေ သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စစ်ပွဲတွေကို ဆက်ပြီး ဖြစ်စေချင်ပါသေးလား လို့ မေးကြည့်ချင်မိပါတော့တယ်။
ဓာတ်ပုံများ အားလုံးမှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ ပကတိမြင်ကွင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
Links to this post 38 comments